2077 मंसिर 16, मंगलबार
यूट्यूब ट्रेन्डिङमा चार नेपाली फिल्म
cinepati | प्रकाशित: २०७७, मंसिर ५, शुक्रबार
कोरोना महामारीको कारण यतिबेला सिनेमा हलहरु सुनसान छन् । रिलिजको मुखमा आएर ‘म यस्तो गीत गाँउछु, प्रेमगीत ३, चपली हाइट ३’ लगायतको केही फिल्महरु रिलिज हुन पाएनन् ।चलचित्रकर्मीहरु फिल्म हल कहिले खुल्ने र सामान्यरुप काम गर्न कुरिरहेका छन् । हलमा फिल्महरु रिलिज नभएता पनि युट्युवमा भने केहि नेपाली चलचित्रहरु रिलिज भएका छन् । जसमध्ये दुई साता अघि रिलिज भएको ‘ए मेरो हजुर ३’ ले नेपालको यूट्यूब ट्रेन्डिङ १ को स्थान ओगटेको छ । अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्रलाई अभिनेत्री झरना थापाले निर्देशन गरेकी हुन् । हलमा व्यवसायिकरुपमा सफल भएको ए मेरो हजुर ३ लाई युट्युवमा झण्डै एक करोडले हेरिसकेका छन् भने दर्शकले रुचाएका छन् ।
त्यस्तै एकसाता अघि युट्यवमार्फत रिलिज भएको ‘साईली’ ट्रेन्डिङको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । एकसातामा यो चलचित्रलाई करिव ३५ लाखले हेरिसकेका छन् । रामबावु गुरुङको निर्देशनमा बनेको साइलामा दयाहाङ राई, गौरव पहारी, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
व्यवसायिक र समिक्षागत रुपमा सफल चलचित्र ‘ प्रसाद’ पनि यतिबेला युट्यवमा रिलिज भइसकेको छ । रिलिज भएको २४ धन्टा नबित्दै सात लाख बढिले यो फिल्मलाई हेरिसकेका छन् । हाल ट्रेन्डिङ ५ रहेको प्रसादमा निश्चल बस्नेत, नम्रता श्रेष्ठ, बिपिन कार्कीको मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन् भने सुशिल पौडेलले लेखेका हुन् ।
त्यस्तै एकसाता अघि रिलिज भएको कुम्भ करण युट्युवको ट्रेन्डिङ ६ मा रहेको छ । हलमा खासै सफल हुन नसकेको चलचित्रलाई युट्युवमा ११ लाखले हेरिसकेका छन् । चलचित्रमा भोलाराज सापकोटा , गौरव पहारी, निशा अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
छैन दुविधा चैत्र ३० मै हुनेछ प्रदिपको ‘लिलिबिली’ रिलिज
अन्ततः फागुन २५ मा आउने भयो गाँजाबाजा
सौराहामा यसरी हुदैँछ सुशीलको ‘लभ डायरिज’ सुटिङ
यसरी बन्दैछ 'एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती' (फोटो फिचर)
‘शुभयात्रा साँझ’मा हेमन्तको ‘साइली’ देखि सन्दिपको कमेडीसम्म
केकीको 'ठेकीमा दही', अंकितलाई कि राजारामलाई ?( भिडियो सहित )
आधा आयु (कविता)
हिट 'साइली'को कथामा चलचित्र, को बन्नेछन् साइला,साइली ?
स्वर सम्राट्को सम्झनामा सुगमको'श्रद्धेय नारायण गोपाल'(भिडियो)
वरुण र साराको ‘कुली नम्बर १’ को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
'मेरी सोल्टिनी' भन्दै बर्षालाई पल (भिडियो)
चलचित्र क्षेत्र चलायमान गराउन सघंसस्थाहरुको दवाव
कोरोनाले रोकिएको ‘परदेशी २’को सुटिङ सुरु